သင်သည်ဤရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရှာဖွေမှုရလဒ်စာမျက်နှာတွင်ပါဝင်သင့်သည် Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 3, 2009 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
ယနေ့ညတွင်ကျွန်ုပ်သည် Techmakers ၏ပထမဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသီးခြားဌာနခွဲဖြစ်သော Rainmaker ၏ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုစကားပြောခွင့်ရခဲ့သည်။ Indianapolis တွင် ၇ နှစ်နေထိုင်ပြီးနည်းပညာကဏ္ of ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ပုံသဏ္takeာန်ပြောင်းလဲသွားသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်မှာအလွန်ကောင်းသည်။
ငါယနေ့ည skit လုပ်ခဲ့တယ်ကအတော်လေးကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ထင်ပါတယ်။ Doug Theis သည်ကျွန်ုပ်အကြံဥာဏ်ကိုမျှဝေပြီးနောက်သောကြာနေ့၌ကျွန်ုပ်နှင့်အတူထိုင်။ ကျွန်တော်ထွက်ပြေးခဲ့သည် ဇာတ်ညွှန်း အတူတူ။ Skit သည် Exchange ပြissueနာကိုဖြေရှင်းရန် IT အရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေနေသောစိတ်ကူးယဉ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီကအကူအညီတောင်းခံခဲ့သည် - ပထမ၊ Facebook တွင်၊ LinkedIn၊ တွစ်တာနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ကော်ပိုရိတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖြစ်သည်။
ဤနတ်သမီးပုံပြင်များအနက်တစ်ခုသို့လည်ပတ်တိုင်းဘေးအန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ ကော်ပိုရိတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သောရည်ညွှန်းချက်သည်အိုင်တီလဲလှယ်ရေးအကြံပေးခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီနှင့်ထိတွေ့ရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများပံ့ပိုးပေးသည့်အကြောင်းအရာများမပါ ၀ င်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုတုံ့ပြန်မှု၏အကူအညီနှင့်အတူအလွ Over- တုံ့ပြန်ခဲ့သည် Lorraine ဘောလုံး နှင့် Doug Theis ၏ Lifeline ဒေတာစင်တာများ.
skit ၏နိဂုံးသည်ကျွန်ုပ်အား Google မှပေးသောသက်ဆိုင်ရာရလာဒ်များ၊ of ည့်သည်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အသုံးပြုမှုရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ပြောနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့လာရောက်သူများသည် ၀ ယ်ရန်မရည်ရွယ်သော်လည်းထုတ်ကုန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေသူတစ် ဦး မှထိုရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ ၉၀% သောလူများသည်နေ့စဉ်အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ရှာဖွေခြင်းကိုထည့်သွင်းထားသည် - Facebook, Twitter, LinkedIn စသည်တို့သည်ပေါင်း ၄% အောက်သာရှိသည်။
အမှန်မှာထိရောက်သော ၀ င်ငွေများကိုရယူလိုသောကုမ္ပဏီများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာ (သို့မဟုတ်မျိုးစုံ) ကိုအသုံးပြုရမည်။ SEO အတွက် blogging ခဲများကိုရယူရန်အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
စနစ်တကျရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်တော်သောဘလော့ဂ်များ။ အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေသောအလွန်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများဖြင့်အကန့်အသတ်မရှိရောက်ရှိခြင်း - သင်ကအကြောင်းအရာကောင်းများရေးသားနေသမျှကာလပတ်လုံး၊
စနစ်တကျရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်လျော်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များ။ ဆိုက်၏အရွယ်အစားနှင့်သော့ချက်စာလုံးများကိုကောင်းမွန်စွာထားနိုင်ခြင်းအကန့်အသတ်ရှိသော်လည်း SEO ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကောင်းမွန်သောဆင်းသက်နိုင်သည့်စာမျက်နှာမဟာဗျူဟာများရှိသောဆိုဒ်များ။ ဤသည်သည်အလွန်ထိရောက်သောနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် SEO အတွက်အလွယ်တကူကုန်ကျနိုင်သည်။
Pay-per-click ၎င်းသည်ထိရောက်မှုရှိသော်လည်းသင်ရှာဖွေသောသော့ချက်စာလုံးများနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာ (SERP) မှနှိပ်ခြင်းမှ ၅% မှ ၁၅% အထိကန့်သတ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်ငါ blogging သည်ကုမ္ပဏီ၏အကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးသောမဟာဗျူဟာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ ထို့အပြင်ဘလော့ဂ်များသည် RSS ၏ထပ်တိုးအားသာချက်ရှိသည်၊ သင့်ကိုအခြားနည်းပညာများဖြစ်သောဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ twitterfeed) နှင့် website တစ်ခုသို့ပင်စုစည်းမှု။
သင်၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဂူဂဲလ်ကိုရှာပါ (နှင့်ရှိလျှင်တည်နေရာ) သငျသညျသူတို့အားရလဒ်တွေကိုတက်ပေါ်လာသလား သင် ... သင့်တယ်! သင်ဤရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာ၌ရှိသင့်သည်.
Tags: စုစည်းမှုဘလော့ဂ်seo အတွက် bloggingကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများကလစ်နှိပ်နှုန်းပေးဆောင်ဆင်းရဲတဲ့ seoရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များကိုseoဖဆပလ
မတ်လ 4, 2009 မှာ 9: 30 AM
အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုပြသတဲ့ဒီပျော်စရာ skit ထဲမှာငါ့ကိုထည့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များ (ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ၀ ယ်ယူသူများ) သည်၎င်းတို့ကို ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်အခါသင့်ကိုမတွေ့လျှင်သူတို့၏စီးပွားရေးတွင်သင်၌အခွင့်အရေးမရှိပါ။
မတ်လ 4, 2009 မှာ 8: 59 pm တွင်
ငါသည်ဤ post ကိုအထူးနောက်ဆုံးလင့်ခ်ကိုချစ်! ထိုသော့ချက်စာလုံးအတွက်ထိုသန်းပေါင်းများစွာသောစာမျက်နှာများမှသင့်နံပါတ် ၁ ။ အံ့သြစရာ။